‘टेक अर पे’ मा विद्युत् खरिद सम्झौता | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
‘टेक अर पे’ मा विद्युत् खरिद सम्झौता
प्रकाशित मिति २६ मंसिर २०७५, बुधबार १७:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ‘टेक अर पे’ अवधारणाअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता हुने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले व्यवसायीको मागबमोजिम विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा ‘टेक अर पे’ मा गर्ने भएको छ ।
गत वैशाख २५ गते मन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रको आधारमा आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनलाई सघाउ पु¥याउने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८४÷८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै पाँच हजार २५० मेगावाटसम्म नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको टेक अर पेमा विद्युत् खरिद सम्झौता निर्णय भएको हो ।
मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यसअघि प्राधिकरणले ‘टेक एण्ड पे’मा गरेको सम्झौतालाई पनि संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले चार हजार ५०० मेगावाटसम्मका अर्ध जलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद सम्झौता टेक अर पेमा गर्ने निर्णय अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले लामो समयदेखि टेक अर पे मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न माग गर्दै आएका थिए । टेक अर पेमा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा भए त्यसको शोध भर्नाका लागि सरकारसँग माग गर्ने स्वीकृति पनि बैठकले दिएको छ ।
सो सम्झौताको प्रावधान राखिएपछि निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा विद्युत् सम्झौता गरेका अधिकाँश आयोजनामा टेक एण्ड पे मा गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तो सम्झौता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी नगर्ने र विद्युत् बिक्रीसमेत नहुने हो कि भन्ने गुनासो ऊर्जा उद्यमीको थियो । सो गुनासोलाई समेत मंगलबारको निर्णयले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले प्राधिकरणले पछिल्लो पटक गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले लामो समयदेखि ऊर्जा उद्यमीले माग गर्दै आएको विषयलाई मंगलबारको निर्णयले सम्बोधन गरेको र त्यसले सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकारात्मक वातावरण बनाएको प्रतिक्रिया दिए । करीब एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका थिए ।
क्रसर उद्योग संकटमा, बालुवा गिट्टीको अभाव
मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक…
‘बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ’ भन्ने नेताका छोरा/छोरी युरोप अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गर्दै
काठमाडाै । समय फेरीयो माओबादीका नेताहरूको बिचार फेरीए।कोही माओबाद त्याग गरी नयाँ शक्ति बने भने कोही नेकपा बने आखिर…
महिनावारीको भएको बेला गरिने सेक्सभित्रका १० रोचक तथ्य !
हिन्दु धर्मशास्त्रमा त सम्भोगको बेला नारी अछुत हुने र त्यस्तो बेला स्त्रीसँग समागम गर्ने पुरुष नर्कमा जाने उल्लेख छ…
प्रधानमन्त्रीको सातो लियो कांग्रेसले, ओली सुपर लम्पसारवादी
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका सवालहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस झनै आक्रमक भएर प्रस्तुत भएको छ ।
काठमाडाैं । बंगलादेश सरकारले आगामी २२ बर्षभित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावट विधुत लैजाने योजना बनाएको छ ।
ढाकामा बिहीबार सुरु…
कहाँबाट आयो क्षेत्रीको अर्बौं रकम ?
मकवानपुर । भाद्र २४ गते आइतबारबाट अवकाश पाएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले जाँदाजाँदै अकुत सम्पत्ति जोडेको प्रमाण भेटिएको छ ।…